Jordania: Mety ampiditra anao am-ponja ny mandefa mailaka sy manoratra tononkalo an-tserasera! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 4:41 GMT
Ny 9 Oktobra 2007, voasazy roa taona an-tranomaizina noho ny “fanohintohinana ny fahamendrehan'ny fanjakana”, ny “fandefasana vaovao diso tamin'ny alàlan'ny mailaka” ary ny ” fizarana taratasy tsy ara-dalàna” i Ahmad Oweidi al-Abbadi , 62 taona, parlemantera teo aloha sady mpitarika ny Hetsika Nasionaly Jordaniana.
Nosamborina tamin'ny 3 May 2007 i Ahmad Oweidi al-Abbadi, noho izy niampanga ny governemanta ho nanao kolikoly tao anaty taratasy misokatra nalefa mailaka tany amin'ny loholona Amerikana Harry Reid. “Nampiseho ny fanagadrana an'i Ahmad Oweidi fa namoha indray ny fomba fanaony teo aloha amin'ny fanenjehana ireo mpitsikera amin'ny alalan'ny fandefasana azy ireo any am-ponja ny governemanta Jordaniana ,” hoy i Sarah Leah Whitson, Tale ao amin'ny Human Rights Watch any Afovoany Atsinanana.
Araka ny gazety Jordaniana Al-Ghad, Jordaniana iray hafa no voasazy 18 volana an-tranomaizina noho ny nanoratany sy namoahany tononkalo tao amin'ny tranokalan'i Jihadi izay nidera ny mpitarika Al Qaeda Osama Ben Laden. Nosamborina tamin'ny 9 Aogositra 2007 i Mohammed Al-Zohairi, izay nolazaina ho “Poetan'i Al Qaeda ” ary voampanga ho maniratsira ny fahamendrehan'ny mpanjaka.
Fonom-boky : “Ra Manorana” eo an-tampony ary ” Poetan'i Al Qaeda, Mohammed Al-Zohairi ” eo amin'ny farany ambany. Loharano: Warriors Literature Blog